Egbe lechasịrị mbe buru ya. Ka egbe na-aga n’ụlọ ya dị n’elu ọjị, mbe were jụa egbe, ọ bụ gịnị ka ya mere o ji enye ya ụdị onyinye ọma ife efe? Egbe zara ya sị na ya anaghị enye ya onyinye ọbụla, kama na ya na-eburu ya ka ya na ụmụ ya were anụ ya gba azị.
Mbediogụ agwa ya sị n’ọ bụrụ na ọ bụ ihe o bu n’obi, ka o bughachi ya azụ ka ya ga weta mkpụrụ obi ya na umeji ya maka na ọ bụ ha na atọkarịcha ụtọ. Egbe atụgharịa, buru mbekwu laghachi n’ụlọ ya.
Mgbe ha rutara, mbadiọgụ, abọkasịba ala n’obi ya. Egbe jụrụ ya sị, ọ bụ gịnị ka ị na-eme ịbọkasị ala? Mbediọgụ zara ya sị na ọ bụrụ na ụmụ nna ya nụrụ na egbe bịara buru ya. Na emeghị ihe ọzọ, ha ga ahụ ka mụ bọkasịchara ala. Nke a ga-eme ka ha mata na a nwụghị dimkpa ka ọkụkọ pụa.
Ha ga-ahụ na mụ gbakarịkwara ala ịzọ onwe mụ tupu egbe eburu mụ.
O yoyoyoyo Egbe eburula Mba o yoyo!